bhimphoto: June 2012
‘Mastermind’ of Babarmahal blast held; owns up bombing
BIRATNAGAR- Police have arrestedaman said to be the mastermind of the February 27 Babarmahal blast in the Capital that killed three persons.
Rajkumar Tamang, aka Bishwokranti, who had been hiding in an animal shed at Lungaruppa VDC-2 in Panchthar, was arrested on Monday night and brought to the Eastern Regional Police Office at Biratnagar, said Deputy Superintendent of Police (DSP) Bhim Dahal.
Explosives and documents belonging to the Samyukta Jatiya Mukti Morcha, an underground outfit of which Tamang is the spokesperson, were recovered from him. Tamang was made public on Wednesday. He admitted to the deadly blast outside the office of the Nepal Oil Corporation at Babarmahal. “Taking innocent civilians lives was not our intention at all,” he said. Tamang, however, did not say why the bombing was carried out. Police also did not say what the motive actually was. They said they are still investigating the incident. Deputy Inspector General (DIG) Surendra Bahadur Shah said Tamang had been living around the eastern hill district of Panchthar for the last three months. In the wake of the bombing, he had fled to Sikkim,astate in India bordering parts of eastern Nepal. He then made his way to Panchthar, police said.
“He had been active all this while, building support for his group by taking former Maoist combatants and activists of the Kirat Janawadi Workers’ Party into confidence,” Shah said. “Investigations also found that he was planning to carry out bombings in Ilam, Jhapa and Panchthar.” After the Babarmahal bombing, Tamang called several media houses using the alias of Bishwokranti and in some cases, Devraj Lama, and claimed responsibility for the incident. When the police traced his calls, two locations in Dhankuta and Ilam came up. The number Tamang had used belonged to one Madan Tamang, who has also been arrested.bombing from Pg 1
Later, the police learnt from sources that he had been spotted in Lungaruppa VDC in Panchthar. Based on this information, the police raided Tamang’s hideout on the night of June 9, but were unable to find him. “On Monday night, we carried out another raid. This time it was at an animal shed, which is three-hours uphill from his previously reported hideout. We besieged the place and caught him unawares,” Dahal said.
Tamang was taken to the Capital on Wednesday. The police have already arrested Bhim Bahadur Tamang, Nima Dorje Tamang, Buddhi Bahadur Gole, Prem Tamang, Sagar Lama and Suresh Lama of their suspected involvement in the blast.
Tamang began his political career when he wasastudent at the Jalpadevi Secondary School in Dhankuta during the late 1980s. He was then an activist of Nepal Students Union, the student body of the Nepali Congress. Later on, he joined the CPN-UML and rose to the post of party regional vice chairman. After the UML split, Tamang joined the breakaway faction CPN (Marxist-Leninist).
During this time, he startedatravel and trekking company and in early 2000, went to Canada. Police later found that Tamang also travelled to Afghanistan, where he worked asasecurity escort. After his return to the country, he rejoined politics as coordinator of the Nepal Janatantrik Tamang Morcha and later joined the Ramraja Prasad Singh-led Navajanabadi Morcha, of which he became the central vice chairman. He also contested the 2008 Constituent Assembly elections from the party in Kathmandu constituency-3. He began an armed rebellion after forming the Samyukta Jatiya Mukti Morcha in 2010.
The same year, Tamang and his outfit reportedly carried out bombings at the central offices of the Rastriya Prajatantra Party Nepal and the Rastriya Janamorcha Party. The group was also linked withablast ataDhading-based crusher industry, roadside bombings in the districts of Bara, Parsa and Rautahat and most recently, the Babarmahal bombing.
(Published in The Kathmandu Post 0n 2012-06-28 )
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 11:27 AM
गए नरम भाषाका विद्रोही कवि
अब सिङ्गै नेपालको
अर्थ लाउन सक्दैन
काठमाण्डू भित्रभित्रै गुम्सिसकेको छ
मञ्जुश्रीको अर्को तरबारको
विकास खोजिरहेछ ऊ
युगका गह्रौं पाइलाहरू अब
धेरै बोक्न सक्दैन
यसैले बग्ने निकास
झन्डै चार दशकअघि कामको सिलसिलामा काठमाडौं खाल्डो पुग्दा संघीयताको आवश्यकता संकेत गर्ने यस्तो कविता फुराएका दूरदर्शी स्रष्टा कृष्णभूषण बल संसारबाट बिदा भएका छन् । गत शुक्रबार मर्निङवाकबाट फिरेपछि नुहाउन बाथरुम पसेका बेला ६५ वषीय कविलाई ब्रेन हयामरेज (मस्तिष्कघात) भएको थियो । उनकी श्रीमती शोभा लामाका अनुसार, त्यो बिहान उनलाई तत्काल विराटनगरको न्युरो अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । त्यसयता कोमामा रहेका बललाई चिकित्सकले सोमबार साँझ साढे सात बजे मृत घोषणा गरेका हुन् । उनी उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित थिए । जीवनसंगिनी नर्स भएकाले उनको खानपान सन्तुलित थियो, औषधि नियमित थियो ।
कवि सुमन पोखरेलका अनुसार, बलको पार्थिव शरीर सोमबार बेलुका नै विराटनगर-१३ स्थित उनको निवास लगिएको छ । मंगलबार अन्तिम श्रद्धाञ्जलिका लागि पार्थिव शरीर दुई घन्टा हाटखोलास्थित आरोहण गुरुकुल परिसरमा राखिने छ । त्यसपछि पोखरियास्थित परोपकारघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने परिवारले जनाएको छ । बलका श्रीमती, एक छोरा र छोरी छन् । इलाममा जन्मेका बलले लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे जीवन बिताएका थिए । अवकाश भएपछि एक दशकयता उनी वाणी प्रकाशनका अध्यक्ष थिए । नेपाली लेखक संघका सहअध्यक्ष उनी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभासद् पनि थिए । जागिरे दिनचर्यालाई उनले कुनै समय कवितामा यसरी लेखेका छन् :
कार्यालय आउँछन् थचक्क बस्छन्
ऊभित्रको कविलाई निकालेर टेबलमा राख्छन्
पेपरवेटले थिच्छन् र जतन गर्छन्
स्वाभिमानलाई झोलामा राख्छन्,
जति जानेका हुन् बिर्सन्छन्
अप्ठेरो हाकिमलाई सबैभन्दा विद्वान् मान्छन्
कार्यालयको परिचयपत्र घाँटीमा
डोरीले बाँधेर झुन्ड्याउँछन्
मानौं, त्यही डोरीले भैंसी बाँधेझैं
उनी बाँधिएका छन्
र कार्यालय अवधिभर भूषणजी यसरी नै बाँच्छन्
बेलुकी पाँच बज्नासाथ भूषणजी घरतिर लाग्छन्
टेबलमा थिचेर राखेको कविलाई आफूभित्र हाल्छन्
दिनभरि थला परेको कविलाई
कहिले त्यति बेलै लेख्छन् र च्यात्छन्
नभए बिहान लेख्छन् र हेर्छन्...
पञ्चायतकालमा 'सुनाखरी लामा' नामबाट 'देशान्तर' साप्ताहिकका स्तम्भ लेख्ने बल नरम भाषामा विद्रोह बोल्ने कविका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । यही विशेषताका कारण उनी तत्कालीन प्रशासनको कोपभाजनमा पर्ने गरेका थिए । उनलाई पछिल्लो समय नजिकबाट संगत गरिरहेका रंगकर्मी खेम नेपाली भन्छन्, 'नेपाली कवितामा भूपि शेरचनपछि उहाँको स्थान छ । उहाँका कविताको ओज कहिल्यै हराउनेछैन ।'
सरल व्यक्तित्वका धनी कवि बलको गत साउनमा हाटखोलाको गुरुकुलमा एकल कविता वाचन कार्यक्रम भएको थियो । उनी युवा सर्जकहरूलाई पनि सिर्जनामा लागिरहन प्रेरणा दिन्थे, हौस्याउँथे । साहित्य लेखनमा धेरै पुरस्कार पाएका उनी कृतिको चाङ बढाउनुभन्दा थोरै तर, गुणस्तरीय सिर्जनामा रुचि राख्थे । प्रकाशित कृतिको सूची लामो नभए पनि उनका काव्यचेतलाई नेपाली साहित्यमा विशिष्ट मानिन्छ । 'दाज्यु तिम्रो हात चाहिन्छ' (खण्डकाव्य), 'भोलि बास्ने बिहान' र 'द फुल मुन एट द रिभरब्यांक' आदि उनका प्रकाशित कृति हुन् ।
गत वर्ष कवि बलका विषयमा प्रकाशित गुरुकुलको लेखोटमा स्रष्टा कृष्ण धरावासीले लेखेका छन्, 'तीसको दशकका समकालीन कविहरूभन्दा अलग्गै रूपमा बललाई उनका कविताले उभ्याउँछन् । निरंकुशताप्रतिको विद्रोह र स्वतन्त्रताको चेतना उनका कविताको मुल स्वर हो ।'
(कान्तिपुर दैनिकको कला र शैली पृष्ठमा प्रकाशित मिति: २०६९ असार १२)
कवि बलको बिदाइ
विराटनगर, असार १२ -
नाटकघरको आँगनमा बिहानैदेखि बाटो कुर्नेहरूले समयको भेउ पाएका थिएनन् । मंगलबार १० बज्दा पनि नआइपुग्दा अधैर्यहरूको भीडले 'बलको बलेसी' घेरा हाल्यो । लामाहरूले विधि पुर्‍याए । कफिन आइपुग्यो । कविको पार्थिव शरीर त्यसमा राखिएपछि सेतो धजामुन्तिर उभिएर श्रद्धाञ्जली दिनेको र कफिन बाकस उचाल्न हात उठाउनेको लस्कर बाटासम्मै आइपुग्यो ।
मस्तिष्काघातले सोमबार साँझ दिवंगत कवि कृष्णभूषण बलको शवयात्रा घरबाट संसारी माईस्थान हुँदै वाणी प्रकाशन पुग्यो । मिनी टि्रपरमा राखिएका उनलाई अन्तिम बिदाइ गर्नेले बाटाभरि नै भीड बनाइरहे ।
मध्याह्नको चर्को घाम छिचोलेर शवयात्राको लर्को हाटाखोलास्थित आरोहण गुरुकुलको नाटकघरको प्रांगणमा पुग्यो । बाटा ढाकेर सवारीसाधनको भीडले थाहा नपाएकाहरूलाई पनि बलको बिदाइबारे अवगत गरायो । भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले राष्ट्रिय झन्डा ओढाए । उपमहानगरभित्रका अधिकांश साहित्यिक कार्यक्रममा दुई जना अतिथि अनिवार्य जस्तै हुन्थे । पोखरेल र बल । वयोवृद्ध पोखरेल गफिन रमाउने, बल सुनिदिन मन पराउने । थोरै बोल्ने, अनि अरूलाई ध्यान दिएर सुनिदिनेहरू स्रष्टाले मन पराउने मान्छे हुँदै हुन् । उमेरमा कान्छा भए पनि पोखरेललाई सम्मान गर्दै साहित्यमा पछयाउन मन पराउने भएकै कारण बल उनका प्रिय थिए ।
झन्डा र फूलमाला अर्पण गरेर भाषाशास्त्री ट्रिपरबाट ओर्लिए । भीडलाई हेरे । केहीबेर बोलेनन् । अनि श्रद्धासुमन अर्पण गर्नेलाई बाटो देखाउन थाले । फोटो खिच्न खोजिरहेकाहरूलाई बोलाएर भने, 'उ त्यो माथि गए सबै प्रष्ट देखिन्छ । तलबाट सबै आउँदैन ।'
गुरूकुलमा मोरङ, सुनसरी, झापा र काठमाडौंबाट पनि बलको अन्तिम विदाइका लागि आएका धेरै साहित्यप्रेमीका आँखा रसिला थिए । मान्छेलाई कालले लैजानु अकाट्य छ । तर, असामयिक निधनको शोकमा सबैसबै आँसु पुछिरहेका देखिन्थे ।
गुरूकुलबाट शवयात्रा चार किमी उत्तर परोपकारघाट पुगुुञ्जेल कवि बललाई श्रद्धार्पण गर्नेहरूको संख्या घटेन । साहित्य बाहेकका क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रह्यो । घाटमा लामा संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्ना प्राज्ञको शोकमा पठाएको सन्देश दाहसंस्कारअघि साहित्यकार दधिराज सुवेदीले पढेर सुनाए । कवि केशव आचार्य, उपेन्द्र पागल र कलाकर्मी माया पौडेलले शब्दमा बललाई श्रद्धासुमन अर्पण गरे ।
राष्ट्र बैंकको जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका बल एक दशकयता साहित्यमा फरक प्रकारले सक्रिय थिए । नयाँ पुस्तालाई हौस्याउने गरिरहेका कारण युवा कलमकर्मी बीच उनको लोकप्रियता चुलिएको थियो । साहित्यका स-साना आयोजनाको निम्तो पनि सहर्ष मानिदिने बानीले उनलाई सबैको प्रिय बनाएको थियो ।
मोतीराम राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष युवा गजलकार ज्योति जंगल भनिन्, 'हामीले अभिभावक गुमायौं ।' ज्योतिले राष्ट्र बैंकमा जागिर थाल्दा बल अधिकृत तहमा कार्यरत थिए । साहित्यिक कार्यक्रमको निम्तोमा उनी र राधिका गुरागाइलाई उपस्थित हुन बल हौस्याउँथे । 'हामी भर्खर लेख्न थालेका भए पनि उहाँको हौसलाले ठूलो बल मिलेको थियो,' उनले सम्झिँन, 'भूषण दाइले सिर्जनाको निरन्तरतामा नसघाउनुभएको भए लेख्ने बानी बस्तैनथ्यो होला ।'
अर्की युवा कवि सविता गौतमले भनिन्, 'उहाँले कवितामा विम्ब चिनाउनुभयो ।' उनले आफ्नो 'रिसलाई छिचोल्दा' कविताको प्रसंग स्मरण गरिन् । त्यति बेला उनलाई बलले भनेका रहेछन्, 'पहिले रिसलाई ऐनामा फाल, त्यसको परावर्तन हेर अनि के आउँछ त्यही लेख ।' धराने स्रष्टा बद्री पलिखेले बलको थोरै बोल्ने र सबैलाई सम्मान गर्ने बानी सम्झिए । भने, 'थोरै बोले पनि लागेका कुरा फयाट्ट भन्ने बानी थियो ।'
साताअघि राजधानीका एक सञ्चारकर्मीसँग मृत्यु संवादका विषयमा फोनमा कुरा गरिरहेका बेला बलको प्रतिक्रिया कवि मनु मञ्जिलको स्मृतिमा ताजै रहेछ । 'मृत्यु के हो, कहिले, कसरी, किन भन्नेमा दार्शनिक तवरको प्रसंग सुनेपछि भूषण दाइले भन्नुभएको थियो,' उनले भने, 'मृत्यु संवाद पनि सुन्दर हुँदो रहेछ ।' बलले कुन अर्थमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए भन्ने अहिले सोचिरहेको मञ्जिलले सुनाए ।
गजलकार मधु पोखरेलको ठम्याइमा बल कवितामा राष्ट्रिय विम्ब प्रयोगकर्ता थिए । 'उहाँका कवितामा विम्ब नेपाली भाषाभित्रैबाट आएका छन्,' उनको परख रह्यो, 'धेरै कविले आगन्तुक, जटिल र अन्य भाषाका विम्ब प्रयोग गरेको देख्छु । उहाँमा त्यस्तो थिएन ।'
(कान्तिपुर दैनिकको कला र शैली पृष्ठमा प्रकाशित मिति: २०६९ असार १३)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:40 PM
यो जीवन अल्झीदै जानेछ, व्यथाहरु बल्झीदै जानेछ
भीडहरु भैकन यहाँ एक्लै एक्लै हिड्नेहरु,
साथहरु भेटिदै जानेछ सपना पुरा हुनेछ ।
कलेज लाइफमा एकपल्ट कवि भइदिनु कसका लागि नौलो होला । कुनै समय थियो जसलाई मैले आफैलाई सान्त्वना दिन गीत लेख्ने प्रयास गरेको थिए । उपरोक्त पंक्ति तिनै २१ वर्षअघिका लेखोटका अंश हुन् । यसका मुखडा मनभरि एउटा लयमा फिरन्ते बनिरहन्छ । लण्डनमा पढ्न बसेको मेरो एउटा आफन्त भाइले गत मार्च २० तारिख मृत्यु रोज्यो । मैले त्यो घटना बारे यसअघि पनि लेखिसकेको छु ।
उ धेरैपटक अनलाइन भेटिन्थ्यो । फेसबुकमा तस्बिरहरु ट्याग गरेर प्रतिक्रिया मागिरहन्थ्यो । केहीमा लेख्थें, केहीका ट्याग म रिमुभ गरिरहन्थे । च्याटमा भिजिबल बस्न छाड्नुका कारण ऊजस्ता झण्डै आधा दर्जन आफन्त र साथीहरू हुन् । जसले अनलाइन देख्यो कि बोलाउथे, अनि व्यक्तिगत, पारिवारिकहुँदै देशको राजनीतिक हालखबर सोध्थे/सोध्छन् । जवाफ नदिए आफूलाई के सोच्लान् भन्ने अप्ठ्यारो, जवाफ दिदै गए समय खेर जानुका साथै मुड अन्तै गएर आफ्ना दैनिक काममा असर पर्ने पिरलो । अनलाइन बस्न छाडेपनि फेसबुके सन्देश बाकसहुँदै आग्रह, आदेश र गुनासा आउजाउ गरिरहन्थे । सुवास (फेसबुक नेम भण्डारीजी) ले आत्महत्या गरेपछि धेरै अफलाइन बस्दा आफैले गल्ति पो गरिएछ कि भन्ने भइरहेको छ ।
सुवास अनलाइन अब भेटिदैन । म जति 'अनलाइन' बसेपनि अब सदाका लागि उ 'अफलाइन' भयो भन्ने थाहा छ । तैपनि बेला बेला मन एकाहोरिन्छ । आत्महत्याको सोच आउनेहरुलाई सहारा चाहिन्छ । अन्तरंग कुरा गर्ने विश्वासिलो साथ चाहिन्छ । कुनै शारीरिक विकार छैन । शरीरका सबै अंग सद्दे छन् । पढालेखा र करिअरप्रति सचेत मान्छेहरू । छदाखादाको जीवनलाई किन मान्छे अनाहकमा त्याग्छन् - यो प्रश्न भिन्न परिस्थितिहरूमा आफैमा जटिल छ । इच्छा भयो 'यस्ताको खोजी गरौ, जसलाई आशले ज्यूदो राखेको छ । सपांग र सजिला अपांगभन्दा भिन्न जीवन बाँचेर पनि जो आफन्तका बीच छन् । उनीहरूलाई आत्महत्याका सपना देख्न बन्देज भएजस्तो ।' असजिला शारीरिक अवस्थामा पनि उनीहरूको मुहारमा मुस्कान छ । नियतिका क्रुरतालाई सामान्य ठानेर बाँचेका छन् । साँच्चै त्यस्ता मान्छेहरू के गर्दैछन् ? मलाई अफिसबाट बाहिर निस्कन मन लाग्यो । गाउँ गएर त्यस्ता घर चिहाउन मन लाग्यो । म विराटनगरबाट बाहिर एक्लै बाइकमा निस्किएँ । अनि यो यात्रा एक साता चल्यो । यो अवधिमा मैले भेटेका मान्छेहरूका कथा फरक थिए ।
मोरङको रंगेली-८ को आमतोला चोकमा झुप्राको सानो पसल । दाउरे चुलोको धुआँले आगन्तुकका आँखा पोल्छन् । छेवैमा बसेको भुसतीघ्रे देखिने किशोरलाई भने कुनै फरक पारेको छैन । उसलाई आगन्तुकप्रति पनि कुनै चासो छैन । 'किन यस्तो, यो भाइ को हो ?' मेरो सोधाइमा पसलेले भने 'मेरो छोरा हो । यो यस्तै छ । आफै केही गर्न सक्दैन ।'
पसले नारायण मण्डलका १४ वर्षे छोरा सुरज सामान्य किशोरहरुभन्दा केही फरक रहेछन् । शरिर आफै अड्याउन, हातगोडा सजिलै चलाउन नसक्ने । उभ्याइदिए उनलाई कतै अडेस लाग्नैपर्ने । 'हामी गाउँलेको घर, पहिलो सन्तान छोरो जन्म्यो, खुशीको सीमै थिएन,' मण्डलले सुनाए 'तर, बच्चा रोएन । एक हप्तासम्म आमाको दूध पनि चुसेन ।' त्यसपछि लगातार उपचारका लागि भौतारिएका उनको दौडाहा एक दशकभन्दा बढि चल्यो । अहिले दुइ वर्षयता कतै पनि जान छाडेका रहेछन् । बोल्दा-बोल्दै आँखा रसाए, भक्कानिए 'हामी आमा-बाउको सास रहुञ्जेल होला । पछि यसलाई कसले हेर्छ भन्ने चिन्ता लाग्छ ।' सुरजका साना भइ र बैनी त्यस्ता छैनन् । तर, उनीहरू दाजुलाई औधी माया गर्छन् ।
घरनजिकै स्कुल छ । अहिले सुरज ह्वील चियरमा बसेर स्कुल जान मन पराउँछन् । यद्यपि समान्यसरह पढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बोली स्पष्ट छैन । आमा-बुवा र भाइबैनी बुझाउनेबाहेक थोरैबाहेक शब्द उच्चारण उनीबाट हुँदैन । तस्बिर लिन खोज्दा पसलमा राखेको भुसको एउटा बोरा लड्यो । सुरज जोडसँग हाँसे । उनको मुन्टो थोरै बाँया बटारिएझै देखियो ।
सोराभाग गाविस-९ मा इँटाभट्टाछेउको सानो झुप्रो बस्ती । ग्वालीजस्ता लाग्ने छाप्रोभित्र एउटा युवक डोरीको खाटमा डल्लो परेर बसेका छन् । छेवैमा भुइमा केश सेतै भएकी बृद्धा छिन् । थोरै कुराकानीपछि तस्बिर खिचिदिँदा मुहारमा मुस्कान दौडियो, जोडले हाँसे । टाउको र हातगोडा अझ बटारिए झैं देखियो । यी २४ वर्षका महेन्द्र कर्मकार लोहार रहेछन् । बृद्धा उनकी आमा बिन्दा ।
'के गर्नु यो यस्तै छ, यसलाई यसरी नै राख्छु, उनले भनिन् 'आमा हुँ नि । यसलाई दिशापिसाप आएको थाहा पाउछु । ढिलो भए फोहोर पारिहाल्छ ।' २ कक्षामा पढ्दै गर्दा एक दिन महेन्द्रले स्कुलबाट फर्केर 'टाउको दुख्यो' भने । विरामी परे । औषधि खुवाइयो । उनले भुँडी पनि दुख्यो भने । धामीझाक्रीका झारफुकबाट सुरु गरिएको उपचारले सञ्चो गरेन । डाक्टरी उपचारका लागि रंगेली लगियो । घर फर्किएपछि उनको जीउ बटारिए झै भयो । अघिल्लो दिनसम्म दौडदै र बोल्दै गरेका उनी अझ असक्त भए । विराटनगर लगियो । 'अस्पतालमा यसलाई सेतो मच्छडले टोकेको छ भन्थ्यो, त्यसपछिदेखि यो यस्तै छ । यसलाई मैले नै हेर्दै आएकी छु', बिन्दाले भनिन्
'बोल्न सक्दैन, केही आफै गर्न सक्दैन ।' महेन्द्रका पिता ट्युवेल गाड्ने काम गर्छन् । घरमा माता-पिता, भाइ र बुहारी छन् । सबैले भ्याएसम्म उनको ध्यान राखेका छन् । आमा भन्छिन् 'कहिलेसम्म हो थाहा छैन । तर, हाम्रो जीउ रहेसम्म त यसको ख्याल गर्नैपर्‍यो ।' बिन्दाले महेन्द्रको परिचय कार्ड देखाइन । रातो कार्ड दिइएका उनले मासिक अपांग भत्ता पाउने रहेछन् ।
सोराभाग गाविसकै कर्सियाको चोकबाट करीव डेढ किलोमिटर उत्तर पुगियो । एउटा घरमा महेन्द्रभन्दा केही फरक युवक गोठमा डल्लो परेझै टुक्रुक्क बसेका थिए । देखिने १४ वर्षे गोवर्धन कर्मकार भात खाइरहेका भेटिए । आँगनमा धानको बिस्कुन थियो । त्यो बिस्कुन खान आउने चरा तर्साउन एउटा डालोलाई सानो छडीको टेको लगाइएको थियो । छडी बाधेको डोरीको एउटा फेर गोवर्धनले च्यापेर बसेका थिए । मैले उनका अभिभावकको खोजी गरेँ । उनीहरू निकै पर खेतमा मुसुरो उखेल्ने धमाधममा थिए । घरबाट निस्किएर खेतमा पुगेपछि मैले कुरा गर्न चाहें । 'यसलाई बेला-बेला मिर्गी (छारे रोग) ले भेट्छ, त्यो बेला बेहोस हुन्छ,' पिता लालचन्दले भने, 'हेर्न ढिला भो भने गु-मुत एकै ठाउँ । कति हेर्ने, कहिलेसम्म हेर्ने, बडो पीर लाग्छ ।' महेन्द्रका बोरमा नारायणले बताएका थिए । अनि गोवर्धनका बारेमा उनकै दिदीले । महेन्द्रको घरमा कुरा गरेपछि छिमेकमा बस्ने दिदीले आफ्नो भाइका अवस्था र भेटिने ठेगाना बताएपछि म खोज्दै त्यहाँ पुगेको थिएँ ।
तीन जनालाई भेटेपछि उनीहरूका लागि काम गर्नेको बारेमा जान्न मन लाग्यो । उनीहरूका परिवारले नै विराटनगरको सिंघिया खोला किनारमा अवस्थित समुदायमा आधारीत पुनस्थापना (सीबीआर) नामक संस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
दोस्रो दिन म सीबीआर पुगें । त्यो संस्थाले एक दशकदेखि यस्ता बालबालिकाका लागि काम गरिरहेको रहेछ । त्यहाँ कृत्रिम हातखुट्टा बनाउने काममा सक्रिय लव कोइराला भेटिए । 'तपाइले भेट्दै हिड्नु भएको केसलाई हामी मस्तिष्क पक्षघात भन्छौ,छोटकारीमा सीपी,' उनले भने, 'अपांगतामा यो सबैभन्दा जटिल अवस्था हो । परिवारले हेरेन भने त्यस्ता बच्चा बाँच्न कठीन हुन्छ ।' सन् २०१० र ११ का दुइ वर्षमा सीबीआरका सम्पर्कमा आएका मस्तिष्क पक्षघात पीडितको संख्या ५ सय ३६ रहेको तथ्यांक कोइरालाले दिए । यिनमा १९७ जना छोरीहरु र अन्य छोराहरू रहेछन् ।
कोइरालाले विराटनगर-५ जामुनगाछीको एउटा घरमा पुर्‍याए । ह्वील चियरमा बसेका २८ वर्षे रवि तुलाधर फेसबुक र ट्वीटर खोलेर चलाइरहेका थिए । एउटा हातको भर । खुशी भए वा केही बोल्न परे उनको मुन्टो धेरैपटक भट्का दिएजसरी बाँया फन्को मार्न खोज्थ्यो । एउटा साँझ भएको भेटले रविलाई मेरो फेसबुके साथी बनाउन पाएँ ।
'हामीले धेरै प्रयास गर्‍यौ उपचारका लागि,' रविका पिता जंगमानले भने, 'अहिले यो यतिसम्म भएको छ । काम चल्ने गरि आफ्ना कुरा बताउन सक्छ ।' पेशाले बिजुलीका सामानका मिस्त्री जंगमान र श्रीमति सूनीताले छोरालाई रुचीअनुसारको वातावरण दिने प्रयास गरेका रहेछन् । कम्प्युटर घरमा आएपछि सिकेका रविलाई भाइ-बैनीले सघाए । वर्डप्रेसमा ब्लग पनि बनाएर लेख्ने-खेल्ने प्रयास थालेका उनलाई तस्बिर संग्रह, फोटोसपबाट रंगहरुको मिश्रण गर्न रुची लाग्दो रहेछ । सीबीआरको अर्थो वर्कसपका इन्चार्ज कोइरालाले भने 'मस्तिष्क पक्षघातका धेरै नाजुक अवस्थामध्ये रविको केस हामी धेरै प्रगति भएकोमध्ये मान्छौ ।' उनका अनुसार रवि यस्ता केसमा प्रगति भएका नमूनामध्येका हुन् । उनको मुहार हँसिलो छ । उनी रमाइला रहेछन् ।
अपांगका हितमा खोलिएका संस्थामा सीपी भएका बालबालिकाका बारेमा केही जानकारी हुन सक्छ भन्ने लागेर म अपांग राष्ट्रिय महासंघको विराटनगर जनपथटोलस्थित अफिसमा पुगे । त्यहाँ भेटिएकाहरूले सीपीमात्रै छुट्याएर तथ्यांक अद्यावधिक नभएको बताए । बरु धेरै जानकारी नजिकबाट दिनसक्ने एक जनाको मोबाइल उनीहरूले मलाइ दिए ।
फोन गर्दा गीता खवासले भनिन् 'पिचरा आउनुस् । अनि भेट होला ।' मोरङको नेमुवाकी खवास मस्तिष्क पक्षघातका पीडितलाई फिजियोथेरापी गराउने गर्दीरहिछन् । उनले गराउने विशेष प्रकार व्यायामले त्यस्ता बालबालिकालाई सुधार भइरहेका उदाहरणहरू छन् । मैले खवासलाई भेटेर त्यो दिनभरि उनी जाने केही घरहरूमा पुगें । र, थेरापी हेरें । अनि अभिभावकहरूसग कुरा गरें ।
पाँच वर्षदेखि यो काममा खटिरहेकी खवासका सम्पर्कमा उपमहानगरभित्र र हातिमुडा र नेमुवा गाविसमा गरि ६५ जना त्यस्ता बालबालिका रहेछन् । विराटनगरको बसपार्कछेउ डेरा बस्ने खोटाङ चिसापानीका राजन र गीता बस्नेतका चार वर्षीय पुत्र सीजन, पिचरा बस्ने संखुवासभा खादवारी-९ का विष्णु र सीता चौहानकी चार वर्षीया मेलिना र बसपार्कछेउका गणेश-कमला थापाका एक्ला १८ वर्षे छोरा रोजेशसँगै पिचरामा शान्ती महत्तोकी १५ वर्षीया छोरी संगीतालाई एकै दिन भेटियो । यिनमा सबैको कथा सुधारोन्मुख अवस्था अनि अभिभावकका प्रयास र मायासँग जोडिएका रहेछन् । बैशाखीमा आउजाउ गर्ने संगीता बोल्न सक्छिन् । लेख्न पनि सक्छिन् । स्थानीय बालकल्याण बिद्या मन्दिरमा ६ कक्षामा पढ्छिन् । ह्वीलचियरको सहारामा रहेका रोजेश बोल्छन् तर, बिद्यालय जान पाएका छैनन् । उनका अभिभावक स्कुल पठाउन चाहन्छन् । अपांग महासंघको काम गर्राईमा सन्तुष्टी रहेनछ ।
त्यस्ता केटाकेटीलाई फिजियोथेरापी गराउने तालिम पाएकी खवासले आफू ललितपुरको धापाखेलस्थित सीपी सेन्टरका लागि काम गर्ने गरेको बताइन । कुनै समय सीबीआरमै काम गरेकी उनले सीपी सेन्टर ज्वाइन गरेकी रहछिन् । खवास भन्छिन् 'बुझेका आमा-बाउले नानीहरुको अवस्था सुधार्न प्रयास गरेका छन् । गाउँमा चाहि बिजोक भेटिन्छ ।' अपांगताको परिचयपत्र र भत्ताबाहेक यस्ता नानीहरुका लागि सरकारीतवरको विकल्प छैन । 'सीपीका धेरै स्टेजमध्ये सुधार गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छन्,' उनले भनिन् 'धेरै परिवारमा मेरो बच्चाको कस्तो अवस्था हो, के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको म भेट्छु ।' परिवारका सदस्य एउटा यो समस्याबाट पीडित हुँदा अन्यलाई मनोबैज्ञानिक उपचार चाहिएका अवस्था पनि भेटिने उनको अनुभव छ । सीपीका पाँच अवस्थामध्ये कोमा पनि एउटा रहेछ । कोमामा गएकाहरू हलचल गर्दैनन् । बोल्दैनन् । कुनै पनि प्रतिक्रिया दिदैनन् । तर, ती बाहेकका चार अवस्थामा बालबालिका बोल्ने भएपनि नबुझिने, सञ्चार संवाद असजिलो ।
खवास र कोइरालाले मलाई डा. ममता वर्मा भेट्न सुझाव दिए । उनले सीबीआर सञ्चालनमा निरन्तर सहयोग गरेकी रहछिन् । आफू महिलाको प्रसुतीसम्बन्धी केसहरू हेर्ने भएपनि उनलाई मस्तिष्क पक्षघातबारेमा धेरै जानकारी रहेछ ।
ललितपुरको सीपी सेन्टरलाई पनि उनले सहयोग गरेको कुरा थाहा भयो । त्यस्ता पीडितका लागि विराटनगरमा सेवा केन्द्र खोल्ने तरखर पनि सुरु भएको उनीसँगको भेटपछि थाहा भयो । त्यसका लागि कोठा डा. बर्माले नै उपलब्ध गराउन लागेकी रहिछन् । डा. वर्माले भनिन् 'यस्तो केस एक हजार बर्थमा २/३ वटा हुन्छ । गर्भवती अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँच, पोषिला खानेकुरा अनि बच्चालाई रोग प्रतिरोधक खोपहरु दिनु जरुरी छ भन्ने बुझे यो टर्न सक्छ ।' कुनै खास कारणले दिमागका आदेश शरीरका अंगहरूले मान्न नसक्ने अवस्थालाई नै यो पक्षघातको स्वरुप हुने उनले बताइन । 'यो भएपछि रिकभरीको चान्स अवस्था हेरेर हुन्छ,' उनले भनिन् 'धेरै बच्चाहरुले बेलैमा उपचार र फिजियोथेरापी पाएपछि सुधार भएका उदाहरण पनि छन् ।'
डा. वर्माका पति डा. नारायण कुमारले पनि यस्ता केसबारे प्रष्ट पारे । मस्तिष्क पक्षघात एउटा जटिल अवस्था भएपनि यो कसरी हुन्छ भन्नेमा उनीहरूका कुराले म प्रष्ट हुन सकिन । जन्मदै हुने यी विकार हुर्कदै गएर कुनै खास प्रकारका घटनाका कारण पनि हुन सक्ने रहेछ । तर, धेरै यसरी जटिल अवस्थामा पनि बाचेर जीवनको सपना साँचेका छन् ।
यी सबै भेट र कुराकानीपछि कान्तिपुर कोसेलीका लागि मैले लेखेको 'जीवन अल्झाउने आशा' गत शनिवार प्रकाशित पनि भएको छ । माथि उल्लेखति कुराका धेरै अंश मेरो कोसेलीको लेखोटमा छ । पत्रिकामा ब्लग जसरी लेख्न मिल्दैन । विषयका अवस्था हेरेर दैनिकी पठाउन पनि मिल्दैन । मैले अवस्थाका जटिलतालाई शब्दमा धेरै खिप्न सकिन भन्ने लागेको छ । छापिएपछि गुगलमा खोज्दा त्यस्ता उदाहरण धेरै रहेछन् । मेरो लेखाइमा यसमा देशभरका अवस्था समेटिन पाएको छैन । अझ धेरै ठाउँ घुमेर लेखोट तयार पार्न सकिन्थ्यो । त्यसो गरिएन । एउटा ठाउँबाट आएका उदाहरण अन्य ठाउका मजस्ता सञ्चारकर्मी साथीका लागि पनि विषय बन्न सक्लान् भन्न लागेको छ । प्रकाशित लेखोट पढेपछि केही मान्छेबाट इमेल, फोन र एसएमएसबाट प्रतिक्रिया पाएको छु । यस्ता कुरा पनि पठनीय हुने रहेछन् भन्ने ज्ञान मिलेको छ । नाजुक अवस्थामा पनि आखाहरूले जीवनको सपना देखिरहेका उदाहरण छन् । अनाहकमा आत्महत्या गर्नेहरूलाई घटना गराइहाल्ने सोच आउँदा त्यस्ता घरमा चिहाएर हेरे हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । सबैथोक भएर पनि सन्तुष्टहरू भेटिदैनन् । उनीहरूले महेन्द्र, सुरज र गोवर्धनजस्ताको घर पुगेर हेरे हुने रहेछ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:41 PM
श्रवण कुमार (लघुकथा)
यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । कहाँ खोज्ने ? कसलाई भन्ने ? पत्याउने होइनन् । बरु मलाइ सबैले बौलाहा भन्लान् । तर, समाधान त चाहिएकै हो । धेरैपल्ट मैले त्यो वर्ड फाइल खोलें । हेरें, बन्द गरे । टेम्पररी फोल्डरमा पनि त्यही नामका स्क्रयाप फाइल खोली हेरें । अहं छैन । कता गयो गयो ।
मैले जानाजान डिलिट वा सम्पादन गरेको सम्झना छैन । तर, कथाबाट एउटा पात्र वेपत्ता हुनु कसरी सम्भव हुन सक्छ ? म आफैलाई चित्त बुझदो उत्तर दिन सक्दिन । रिक्शाचालक बृद्ध पिता, बुढी भएकी आमा । सातजना भान्टाङ-भुन्टुङ भाइबैनीको उ भरपर्दो दाजु थियो । दुइ कक्षापछि स्कुल गएन । स्कुले शिक्षा पुरा नगरेपनि महान भएका मान्छेका जीवनी उसलाई कण्ठ थियो ।
मजदुरीबाटै उ राजमिस्त्रीमा बढुवा भएको थियो र्।र् इटा-बालुवा र ढुंगासँग खेलेर उसका ज्यान बलिष्ठ थिए । काम नभएका बेला पहिरनले उसलाई कसैले मिस्त्री मान्दैनथे । ऊ कुनै बडिबिल्डर वा मोडलभन्दा कम देखिदैनथ्यो । ज्यालादारीभन्दा ठेक्दारी मन पराउने । ठेक्का लिएको काम छिटै फत्ते गर्ने ।
राम्रो ठाउँमा जमिन लिएर घर बनाउने । मातापिता पाल्ने । भाइबैनीलाई सकेजति पढाउने । सपनाले उसका विपनालाई साथ दिएका थिए । तर, बाबु ज्यानले सकेसम्म काम छाड्न मानेका थिएनन् । माहिला र साहिला भाइ पढ्न मान्दैनथे । बैनीहरुका पहिरनले सम्पन्न परिवारको झल्को दिन्थ्यो । कथामा मैले एउटा क्लाइमेक्स कल्पना गरें ।
अनि उसको भेट बजारमा एउटा चलेको पसलेकी रुपवती छोरीसँग भेट गराइदिए । जात मिल्थ्यो । बात पनि मिल्थ्यो । पसलेले घरको एउटा तला थप्दा उसलाई त्यहाँ पुर्‍याइयो । हिमचिम देखेर रुपवतीका पिताले प्रस्ताव गरे -'मेरी छोरी बिहे गर्ने भए तिमीले मैकहाँ आएर बस्नुपर्छ ।' मैले लेखें 'तर, उ दुःखमा हुर्केको छोरो थियो । आफ्ना आमाबा र भाइबैना छाडेर कसरी बस्थ्यो ? उसले मानेन ।' त्यो दिनदेखि ऊ पसलेको घरमै गएन । उसले सोच्यो '............... के सोच्यो, कथा यहाँबाटै अपुरो छ । मैले लेखेकै हो । एउटा असल इमान्दार छोराका बारेमा ।
कम्प्युटर अफ गरेर बाहिर निस्के । नजिकै मन्दिरबाट एउटा जोडी बाहिर निस्कदै थिए । बेहुलो सरासर मैंतिर आयो । नियालेर हेरें - चिनेको मान्छे होइन । ठिङ्ग उभियो, कुटील हाँसो हास्यो । भन्यो 'हेर्नुस महाशय, यो कलियुग हो । म श्रवण कुमार होइन ।'
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 3:31 PM
‘Mastermind’ of Babarmahal blast held; owns up bom...